I-Jeraboam Eco Lodge - I-Airbnb
I-Jeraboam Eco Lodge
Indlu ehlukanisiwe, evumelana nemvelo enombhobho enokubukwa okuhle kwe-Mt William Range kanye ne-Grampians. Izungezwe ipaki yesizwe.
IJeraboam iyindlwana ecashile kumahektha angama-90 etholakala ngaphakathi kweGrampians National Park eduze kwaseMoyston. Jabulela ukubukwa okuhle kwe-Mt William Range, bukela ama-kangaroo, ama-emus, ama-wallabies, izinyamazane nezinyoni ezivela emafasiteleni futhi uhambe ehlathini elizungezile. Maningi amathrekhi okuhamba eduze.
UJerabowamu akasebenzi futhi ulwela ukuzimela ngokugcwele ngamandla namanzi. Ukushisa namanzi ashisayo kunikezwa ngesitofu sezinkuni nendawo yomlilo evulekile. Kunendawo enkulu evulekile ezungeze indlu enesethingi yangaphandle kanye ne-barbecue. Kukhona nomgodi womlilo kanye nengadi yemifino kanye nengadi yezithelo lapho wamukelekile khona ukuthi uzikhethele umkhiqizo wakho.
I-bungalow ehlukile equkethe umbhede ophindwe kabili nowodwa kanye ne-heater yezinkuni iyatholakala ngokuhlelwa.
IJerabowamu inomfudlana wayo wesizini kanye nedamu elinomhlaba elihlala njalo, elitholakalayo ukuze kubhukudwe.
4.90 · 144 okushiwo abanye
IJerabowamu izungezwe isiqiwu. Kuyimizuzu eyi-15 uma ushayela usuka esitolo esiseduze (Moyston) futhi alinabo omakhelwane baphakade. Ngenkathi usahleli nathi, uzobona (futhi uzwe) kuphela izihlahla, izilwane zasendle, nezimbali zasendle.
I-Hall Gap, i-Stawell kanye ne-Ararat cishe isigamu samahora uma ushayela njengoba kunjalo neLake Fyans neLake Bellfield. Amawayini, njengeSeppelts, Langhi Ghiran, Montara kanye ne-Bests ayidrayivu elula futhi.
Ungangabazi ukusithinta uma unemibuzo noma izinkinga. Sinomnakekeli ohlala eduze.